एमाले कार्यकर्ताको हड्डी हाँस्या छः मुख्यमन्त्री गुरुङ – Merosamaya
Merosamaya - हर समयको खबर, "मेरो समय"
एमाले कार्यकर्ताको हड्डी हाँस्या छः मुख्यमन्त्री गुरुङ
गण्डकी सरकार ढुक्कै छ
मेरो समय	 २८ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ११:३२ मा प्रकाशित 45 0
पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश
सर्वोच्च अदालतले भन्यो, तिमीहरुको एकताको विधि पुगेन, कानुनसम्वत भएन, प्रक्रिया मिलेन । तिमीहरु एकता गर्न चाहान्छौं भने विधि पु¥याएर आउ । भइरहेको पार्टीको नामबाट अर्को पार्टी दर्ता नगराउ भनेको छ, सर्वोच्चले । त्यसकारण एकता अगाडिको जुन स्थिति हो, पार्टी त्यही स्थितिमा पुग्यो । साविक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँतियो ।
२ वटै दलको संसदीय दल र पार्टी कमिटीको बैठक बसेर २०७४ जेठ २ गते जहाँ थियो, त्यहीँबाट सुरु गर्ने गर्नुपर्ने स्थिति आयो । अब सर्वोच्चको आदेशलाई स्वीकार गरेर पार्टी र सरकार निर्माणमा जुट्नुको विकल्प छैन । नेपाल–दाहाल समूह पुनरावलोकनमा जाने भन्नुभएको छ । तर, त्यसको के अर्थ हुन्छ र ?
एकता भइसकेपछि उपनिर्वाचनबाट सांसद बनेका, राष्ट्रिय सभामा गएका प्रतिनिधिको अब के हुन्छ ? भन्ने हो । सूर्य चिह्न नै लिएर चुनाव लडेका हुनाले उहाँहरु स्वभाविक हिसाबले चिह्न एमालेको भएपछि उहाँहरु पनि यतै हुनुभयो भन्ने मेरो तर्क हो । तर पनि यसलाई कानुनी हिसाबले अझै पार्नुपर्छ होला । सूर्य चिह्न जहाँ छ, नेकपाको अध्यक्ष जहाँ छ त्यहीँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अरु कानुनले नै भन्ला ।
सर्वोच्चको फैसलाले पूर्व एमाले कार्यकर्ता खुसी छन् । कार्यकर्ताको हड्डी हाँस्या छ । सूर्य चिह्न पाइन्न कि भन्ने थियो । पूर्व एमाले ब्युँतियो, सूर्य चिह्न पायो भन्दा सबै कार्यकर्ता खुसी भएका छन् । पार्टीमा किचलो सधैं भइराख्यो भन्ने चिन्ता थियो । एकतापछिको ३ वर्ष जसरी गुज्रियो, जस्तो खालको परिस्थिति बन्यो, त्यसबाट कार्यकर्ता खुसी थिएनन् । जुन खालको विधि, संस्कार, पद्दति पार्टीमा रहनुपथ्र्यो, त्यो रहेन भनेर धेरै कार्यकर्ता चिन्तित थिए । एकता हतारमा गरिएछ भन्ने थियो । तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ता उत्साहीत देखिन्छन् ।
पार्टी एकताको मर्मअनुसारै सरकार बनेका छन् । प्रदेश सरकार पनि एकताको भवनाअनुसारै गठन भएको थियो । परिस्थितिले पार्टी विभाजनै हुदाँ पनि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई समस्या हिजो पनि थिएन, अब पनि हुँदैन । माधव नेपाल–पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समूहमा लाग्नुभएका एक जना सांसद हुनुहुन्थ्यो । अब उहाँ पनि एमालेकै सांसद हो । हाम्रै दलको सदस्य हुनुभयो ।
सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति नआउला भन्ने लाग्छ, मलाई । विश्वासको मत लिँदा साविक एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भोट हालेको हो । मलाई समर्थन गर्ने २ दलमध्ये जनमोर्चाले फिर्ता लिएन भने मलाई अप्ठेरो पर्दैन । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि मेरो ३१ मत पुग्छ ।
दुई बटै पार्टीले समर्थन फिर्ता लियो भने मैले विश्वासको मत लिनपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै समर्थन गरेको छ र प्रतिवद्धता पनि जनाइरहेको छ । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अबको सरकार पनि माओवादी र एमालेकै बन्नुपर्छ भनिसकेपछि समर्थन र्फिता लिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अप्ठेरो परिस्थिति आउँदैन भन्नेमा गण्डकी प्रदेश सरकार ढुक्कै छ ।
एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि राष्ट्रिय राजनीति र प्रदेश सरकारबारे मुख्यमन्त्री गुरुङले दिएको प्रतिक्रिया
नेताहरु चुके, उछिट्टिएको मकै टिप्दै रमाएः माओवादीका मन्त्री चुमान
मीलन फाउन्डेसन लगायतलाई मोदी गाउँपालिकाको सम्मान
सम्बन्धित समाचार लेखकबाट अरु
नेईए गण्डकीमा एमाले ओली पक्ष र कांग्रेस बीच समिकरण भएपछी कार्यकर्तामा ब्यापक…
रोनाल्डो र मेस्सी बिनाको च्याम्पियन्स लिग !
© 2021 - Merosamaya. All Rights Reserved.